Tag: fitambaran'ny sms fidirana | Martech Zone
Tag: fitambarana sms fampidirana
WordPress: Plugin fampidirana SMS
Asabotsy, Septambra 6, 2008 Alahady, Desambra 14, 2014 Douglas Karr
Mety nahatsikaritra ianao fa nangina aho tamin'ity herinandro lasa ity. Tsy noho ny tsy fahampian'ny asa io, fa efa herinandro be izao! Iray amin'ireo tetik'asa niasako tamin'ity herinandro ity ny WordPress Plugin izay mamela ny fampidirana SMS mivantana amin'ny Connective Mobile. Ny plugin dia matanjaka, miaraka amin'ny interface administratif sy interface interface. Ny interface admin dia mamela anao hitantana ny endrik'ilay fampidirana. Ny interface interface dia mamela
Aza atao takalon'aina ataon'ny Mpampivelatra anao
Alatsinainy, May 12, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo aho dia nanomboka resaka tamin'ny mpanakanto iray avy eo an-toerana izay nanampy ny lehibeny tamin'ny fitantanana rindranasa tranonkala roa ananan'ny lehibeny. Nifandimby ny resaka ary nitohy ny fandoavana ny saram-pivoarana isan-kerinandro nefa tsy nahita fandrosoana niaraka tamin'ny developer izay niara-niasa taminy. Ankehitriny ny mpamorona dia te-hanome vola azy ireo vola hafa mba hamita ny tetikasa ary koa isan-kerinandro